I-CrankWheel: Ukucwangciswa kweBypass kunye nokuKhuphela ngeDemos esekwe kwiSikhangeli kwangoku | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 16, 2021 NgoLwesibini, Februwari 16, 2021 Douglas Karr
Lonke unxibelelwano olufunekayo phakathi kwethemba ngenjongo yokuthenga kunye nokubanakho kwiqela lakho lokuthengisa ukubanceda baguquke kunokwenzeka ukunciphisa amathuba okuguqula. Oko kubandakanya ixesha lokuphendula, inani lonqakrazo, inani lezikrini, inani lezinto zefom… yonke into.
Iingcali zentengiso endizaziyo zifuna nje ukufikelela phambi kwethemba. Bayazi ukuba nje ukuba bathethe nethemba, bachonge ingxaki yabo, kwaye bahambe kwisisombululo… kunokwenzeka ukuba babaguqulele kumthengi.
Iinkampani ezininzi zenza loo mava amabi, nangona kunjalo. Sibenza bagcwalise iifom zokufumana isiqinisekiso kwangaphambili, sibacela ukuba bafumane ulwazi, sizicwangcisela ukuqeshwa kwabo… kwaye emva koko siyamangaliswa kukuba amandla ethu okufumana izikhokelo ezifanelekileyo kumasebe ethu okuthengisa anezinga elibi kakhulu lokuguqula.
IiDemos eziKhawulezayo zeCrankWheel
Kuthekani ukuba, ngentsimi enye, unokuhambisa kwangoko isicelo sethemba kwilungu leqela elivuliweyo lokuthengisa? Umane ucela inombolo yefowuni, ilungu leqela elithengisayo liyazibandakanya… nangaphandle kokukhuphela isoftware okanye amanyathelo ongezelelweyo… bangaqala ukubonisa imveliso okanye inkonzo yakho?
IiDemos eziKhawulezayo zeCrankWheel sesona sisombululo. Iinkokheli zentengiso kwihlabathi liphela zisebenzisa iCrankWheel ukuba babelane ngoko nangoko kwiscreen kunye nethemba- akukho khuphelo lifunekayo. Usebenzisa ulwandiso lwabo lweChannel, iqela lakho lokuthengisa linokubonisa ithemba lakho kwiscreen sakho nakwiselfowuni okanye kwidesktop kwimizuzwana engaphantsi kweshumi.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kuba babelana ngenombolo yabo yefowuni… I-CrankWheel ikwazama ukuchonga kunye nokubuyisa idatha ebalulekileyo kwithemba ukuze ube nesiqalo sentloko ekuqondeni ukuba ngoobani, inkampani yabo, nokuba bayakulindeleka okanye hayi ufaneleke ukukhokela.
Ngexesha leentlanganiso zam zemihla ngemihla ezinethemba, ndisebenzisa iCrankWheel ukubonisa inkonzo yethu yewebhu. Kuyandinceda ukubonisa amanqaku ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokufaka nayiphi na inkqubo kwikhompyuter yethemba.
I-Quentin Roquet, i-CEO yeProgenda
Iimpawu zeCrankWheel kunye neziBonelelo
Abasebenzisi beCrankWheel bayabona ukwanda kwama-22x kwinani leedemo Bayakwazi ukuqalisa umbulelo kwiiDemos ezikhawulezileyo.
Incoko yokubamba ekhokelayo -Fumana isikhokelo esingakumbi sombulelo kwiifom zokuncokola ezinokuthi zenziwe kwiwebhusayithi yakho okanye kwimikhankaso ye-imeyile. Yazisa kwangoko abathengisi malunga nethemba kwi-intanethi elinde umnxeba, kwiscreen, nangomyalezo obhaliweyo.
Ukuphuculwa kweNkokeli -Sebenzisa ulwazi olunqabileyo loqhakamshelwano ngokulutyebisa ngolwazi olufanelekileyo olufana nendawo, inkampani, amakhonkco entlalontle njl njl.
Integration -Impendulo yewebhusayithi eyenziweyo ikhokelela kwangoko ngaphandle kokudibanisa ii -apps ezininzi zokuthengisa. Yongeza ngokulula i Ndibize ngoku or Cela iDemo iqhosha kwiwebhusayithi yakho. Izikhokelo zinokuhamba ngokuthe ngqo kwiCRM yakho okanye ezinye iinkqubo zisebenzisa enye yokudityaniswa kwezinto ezikhoyo.
Yenza iAkhawunti yasimahla yeCrankWheel yeDemo
Ukuhamba-ngeCrankWheel ngeDemos kwangoko
Nantsi imbonakalo yevidiyo yesisombululo kuwo omabini amava omsebenzisi kunye namava amalungu elungu leqela elithengisayo. Intle kakhulu!
Ukubhengezwa: Ndililungu le CrankWisithende.
tags: biza ngokuukongezwa kwe-chromecrwheelcrankwheel demos yangokoCRMGoogle chromeidemos yangokoukuphucula ukukhokelaucele idemoidatha yokuthengisaUkwabelana ngemifanekiso